Dho'insi Bombii Ugaandaa Keessaa Lubbuu Nama Hedduu Galaafate
Adoolessa 13, 2010
Dilbata darbe magaalaa galma mootummaa Ugaandaa Kampala keessatti namoonni otuu tapha kubbaa miillaa ka waancaa addunyaa televiiziyoonan daawwachaa jiraanii, dho'insawwan bakka lamatti wal-duraa duuba geggeessaman namoota 74 ajjeesanii 70 ol madeessuu poolisiin Ugaandaa beeksisee jira.
Dho’iinsawwan kilabii Ugaandaa kan Rugby jedhamu fi mana nyaataa “Ethiopian village” jedhamu keessatti geggeessaman kanaan kanneen dhuman keessaa garii lammiwwan Itiyoophiyaa fi lammiwwan Ertiraa ti.
Dho’iinsa mana nyaataa "Ethiopian Village" jedhamu sana keessatti raaw'atame kanneen ijaan arganii fi madaawan kessa Oromoonnis ni turan. Kanneen keessaa tokko hojjetaa mana nyaataa sanaa ka tahe Obbo Alamuu Magarsaa ti. "Otuu uummanni taa’ee kubbaa miillaa ilaalaa jiru dho’iinsi guddaan dhaga’ame. Yeroon gad ba’ee ilaalu, namoota wacanii fi wal irratti kukkufan,fi dhiiga akka bishaanii dhangala’un arge. Hiriyoonni koo yeroo xiqqoo dura na dubbisanii dabranii tapha kubbaa sana ilaalaa turan, kanneen madaawanis kanneen du'anis ni jiran" jedha, obbo Alamuun.
"Miilla koo irra miidhaan ga’e" ka jedhu ammoo, ka yeroo dho'insa sanaa mana nyaataa sana keessaa tapha kubbaa miillaa addunyaa daawwataa ture Abdiisaa Furii Waaqoo ti. "Dho'insa akka tasaa dhaga’uu malee eessa irraa akka dhufe hin beekne" ka jedhu, obbo Abdiisaan " yeroo dheeraaf of wallaalee, miilli koo madaa’uu isaa illee boodan of irratti bare," jedha.
Achuma, magaalaa Kampaalaa irraa kan ibsa nuuf kennan, dura-taa'aan hawaasa Oromoo magaalaa Kampaalaa, Obbo Befeqaaduu Jireenyaa "Waa'ee dho'insa sanaa, halkan waarii jala gara sa'aa kudha-tokkootti nama tu bilbilee natti hime, itti-fufee immoo sagantaa televiiziyoona BBC kan Ugaandaa irraan dhaga'e," jechuu dhaan, achii booda qorannaa itti fufanii, hawaasa Oromoo keessaa namoonni sadii balaa sanaan madaa'uu mirkaneeffachuu isaanii nuuf ibsan.
Gaaffii fi deebii Oromoota Uganda keessaa waliin geggeeffame